Vaovao - Entina hianaranao ny Lalao Nasionaly faha-14 an'ny Repoblika Entim-bahoakan'i Sina
Ento ianao hianatra Ny lalao nasionaly faha-14 an'ny Repoblika Entim-bahoakan'i Sina
Tamin'ny 15 septambra 2021, Ny lalao nasionaly faha-14 an'ny Repoblika Entim-bahoakan'i Sinanosokafana tao amin'ny Faritanin'i Shaanxi, Sina. Ny lalao nasionaly faha-1 an'ny Repoblika Entim-bahoakan'i Sina dia natao tany Beijing tamin'ny 1959, ary 62 taona lasa izay. Ity dia fihaonambe ara-panatanjahantena feno, miaraka amin'ny faritany iray ho singa handefasana solontena handray anjara amin'ny karazana fanatanjahantena, hatsembohana ny atleta ary hahatanteraka ny nofinofin'izy ireo amin'ny fanatanjahantena.
Tsara ny manonona izany voalohany mpitondra fanilo tamin'ny toerana lehibe nanatontosana ny lanonana fanokafana ny Lalao Su Bingtian, fantatra amin'ny anarana hoe "Trapeze Aziatika". amin'nyLalao Olaimpika Tokyo 2020nifarana tsy ela akory izay, Su Bingtian nanapaka ny firaketana aziatika tamin'ny ampahefa-potoana 100 m an'ny lehilahy. Izy no atleta sinoa voalohany niditra tamin'ny lalao olympika 100 metatra lehilahy ary nahavita fahenina tamin'ny fotoana 9,98 segondra. Ho fanampin'izay, ny jiro lehibe dia nodoran'nyYang Qian, izay nahazo ny medaly volamena voalohany tamin'ny Lalao Olaimpika Tokyo 2020. Miaraka amin'ny fanantenantsika sy nofinay iraisana, dia nampirehitra ny fanilo avy tamin'ny Tompo izy.
Atleta maro izay nandray anjara tamin'ny Lalao Olaimpika Tokyo 2020 no hisolo tena ny tenany ihany koa amin'ny Lalao. Ohatra, ao amin'ny ekipa tenisy latabatra sinoa amin'ny Lalao Olaimpika Tokyo 2020,Ma Long nisolo tena an'i Beijing, Xu Xin nisolo tena an'i Shanghai, Fan Zhendong SY Liu Shiwen nisolo tena ny ekipa Guangdong, Sun Yingsha nisolo tena ny ekipa Hebei, Chen Meng nisolo tena ny ekipa Shandong, sns. Nisy tanora mpilalao maro ihany koa tao amin'ity taranaka ity, masiaka tokoa ny fifaninanana.
Ny fifaninanana malefaka ataon'ny atleta dia tsy azo sarahina amin'ny fitaovana fanatanjahan-tena matihanina. Ny kiraro fanatanjahan-tena mahazo aina dia ahafahan'ny atleta mihazakazaka haingana kokoa, mitsambikina kokoa ary manana dingana mora kokoa, manampy azy ireo hanakaiky kokoa ny nofinofin'izy ireo. Sneaker avo lenta dia mahatonga ny atleta malalaka kokoa amin'ny fifaninanana, mihazakazaka, mitsambikina ary miakatra tsy tapaka amin'ny dingana rehetra, mampiseho ny hatsaran'ny fanatanjahantena amin'ny hery.Orinasa kiraro JIANERmanana traikefa mihoatra ny 15 taona amin'ny fanaovana kiraro. Izahay dia manao kiraro fanatanjahan-tena, kiraro mihazakazaka, sneaker, kiraro mahazatra, vokatra kiraro an-tongotra, sns. Manohana izahayBrand OEM sy serivisy fanaingoana ohatra. Manana ny orinasanay manokana izahay, ny R&D ary ny ekipa famolavolana, ary ny ekipa fanaraha-maso kalitao, ny ekipa orinasa, hanome anao serivisy tokana.
Efa mandeha ny lalao nasionaly faha-14 an'ny Repoblika Entim-bahoakan'i Sina. Vita soa aman-tsara ny atleta. Manantena ny vokatra tsara azon'izy ireo izahay. Mbola havaozina hatrany ny atiny fanaraha-maso, ka araho aloha.
Fotoana fandefasana: Sep-16-2021